၎ရာ အခန်းကြီး(၁၉) | Rev.U Min Lwin
Rev.U Min Lwin
မတောကျတဈခေါကျ သိတာလေးတှေ ရေးခငျြလို့ ရေးနတောပါ။
မဿဲ အခန်းကြီး (၁)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂)
မဿဲ အခန်းကြီး (၃)
မဿဲ အခန်းကြီး (၄)
မဿဲ အခန်းကြီး (၅)
မဿဲ အခန်းကြီး (၆)
မဿဲ အခန်းကြီး (၇)
မဿဲ အခန်းကြီး (၈)
မဿဲ အခန်းကြီး (၉)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၀)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၁)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၂)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၃)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၄)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၅)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၆)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၇)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၈)
မဿဲ အခန်းကြီး (၁၉)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၀)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၁)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၂)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၃)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၄)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၅)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၆)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၇)
မဿဲ အခန်းကြီး (၂၈)
မာကု အခန်းကြီး (၁)
မာကု အခန်းကြီး (၂)
မာကု အခန်းကြီး (၃)
မာကု အခန်းကြီး (၄)
မာကု အခန်းကြီး (၅)
မာကု အခန်းကြီး (၆)
မာကု အခန်းကြီး (၇)
မာကု အခန်းကြီး (၈)
မာကု အခန်းကြီး (၉)
မာကု အခန်းကြီး (၁၀)
မာကု အခန်းကြီး (၁၁)
မာကု အခန်းကြီး (၁၂)
မာကု အခန်းကြီး (၁၃)
မာကု အခန်းကြီး (၁၄)
မာကု အခန်းကြီး (၁၅)
မာကု အခန်းကြီး (၁၆)
လုကာ အခန်းကြီး (၁)
လုကာ အခန်းကြီး (၂)
လုကာ အခန်းကြီး (၃)
လုကာ အခန်းကြီး (၄)
လုကာ အခန်းကြီး (၅)
လုကာ အခန်းကြီး (၆)
လုကာ အခန်းကြီး (၇)
လုကာ အခန်းကြီး (၈)
လုကာ အခန်းကြီး (၉)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၀)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၁)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၂)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၃)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၄)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၅)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၆)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၇)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၈)
လုကာ အခန်းကြီး (၁၉)
လုကာ အခန်းကြီး (၂၀)
လုကာ အခန်းကြီး (၂၁)
လုကာ အခန်းကြီး (၂၂)
လုကာ အခန်းကြီး (၂၃)
လုကာ အခန်းကြီး (၂၄)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၂)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၃)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၄)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၅)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၆)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၇)
ယောဟန် အခန်းကြီး (8)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၉)
ယောဟန် အခန်းကြီး (10)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၁)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၂)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၃)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၄)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၅)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၆)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၇)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၈)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၁၉)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၂၀)
ယောဟန် အခန်းကြီး (၂၁)
၁ကော အခန်းကြီး (၆)
၁ကော အခန်းကြီး (၇)
၁ကော အခန်းကြီး (၈)
ရှင်ယောဟန် သြ၀ါဒစာ ပထမစောင်
ရှင်ယောဟန် သြ၀ါဒစာ ဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန် သြ၀ါဒစာ တတိယစောင်
ယုဒ အခန်းကြီး (၁)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၁)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၂)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၃)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၄)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၅)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၆)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၇)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၈)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၉)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၂၀)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၂၁)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၂၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၆)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၀)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၆)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၀)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၆)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၀)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၆)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၃၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၀)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၆)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၄၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၅၀)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၄)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၅)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၆)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၇)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၈)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၉)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၀)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၁)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၂)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၃)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၄)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၅)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၆)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၇)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၈)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၉)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၀)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၁)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၂)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၃)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၄)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၅)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၆)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၇)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၈)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၉)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၀)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၁)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၂)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၃)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၄)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၅)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၆)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၇)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၈)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၉)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး (၄ဝ)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၃)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၄)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၅)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၆)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၇)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၈)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၉)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၀)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၁)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၂)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၃)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၄)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၅)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၆)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၇)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၈)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၁၉)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂၀)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂၁)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂၂)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂၃)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂၄)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂၅)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂၆)
၀တ်ပြုရာ အခန်းကြီး (၂၇)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၃)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၄)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၅)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၆)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၇)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၈)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၉)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၀)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၁)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၂)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၃)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၄)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၅)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၆)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၇)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၈)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၁၉)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၀)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၁)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၂)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၃)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၄)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၅)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၆)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၇)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၈)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၂၉)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၃၀)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၃၁)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၃၂)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၃၃)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၃၄)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၃၅)
တောလည်ရာ အခန်းကြီး (၃၆)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၄)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၅)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၆)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၇)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၈)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၉)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၀)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၁)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၂)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၃)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၄)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၅)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၆)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၇)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၈)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၁၉)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၀)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၁)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၂)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၃)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၄)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၅)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၆)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၇)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၈)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၂၉)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၀)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၁)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၂)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၃)
တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး (၃၄)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၃)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၄)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၅)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၆)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၇)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၈)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၉)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၀)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၁)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၂)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၃)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၄)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၅)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၆)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၇)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၈)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၉)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂၀)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂၁)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂၂)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂၃)
ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂၄)
တရားသူကြီး အခန်းကြီး (၁)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၃)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၄)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၅)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၆)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၇)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၈)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၉)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၀)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၁)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၂)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၃)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၄)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၅)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၆)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၇)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၈)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၁၉)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂၀)
တရားသူကြီးမှတ်စာ အခန်းကြီး (၂၁)
ရုသ အခန်းကြီး (၁)
ရုသ အခန်းကြီး (၂)
ရုသ အခန်းကြီး (၃)
ရုသ အခန်းကြီး (၄)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂)
၁ရာ အခန်းကြီး (၃)
၁ရာ အခန်းကြီး (၄)
၁ရာ အခန်းကြီး (၅)
၁ရာ အခန်းကြီး (၆)
၁ရာ အခန်းကြီး (၇)
၁ရာ အခန်းကြီး (၈)
၁ရာ အခန်းကြီး (၉)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၀)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၁)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၂)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၃)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၄)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၅)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၆)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၇)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၈)
၁ရာ အခန်းကြီး (၁၉)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၀)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၁)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၂)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၃)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၄)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၅)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၆)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၇)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၈)
၁ရာ အခန်းကြီး (၂၉)
၁ရာ အခန်းကြီး (၃၀)
၁ရာ အခန်းကြီး (၃၁)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁)
၃ရာ အခန်းကြီး (၂)
၃ရာ အခန်းကြီး (၃)
၃ရာ အခန်းကြီး (၄)
၃ရာ အခန်းကြီး (၅)
၃ရာ အခန်းကြီး (၆)
၃ရာ အခန်းကြီး (၇)
၃ရာ အခန်းကြီး (၈)
၃ရာ အခန်းကြီး (၉)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၀)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၁)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၂)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၃)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၄)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၅)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၆)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၇)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၈)
၃ရာ အခန်းကြီး (၁၉)
၃ရာ အခန်းကြီး (၂၀)
၃ရာ အခန်းကြီး (၂၁)
၃ရာ အခန်းကြီး (၂၂)
၄ရာ အခန်းကြီး (၉)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၁)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၂)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၃)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၄)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၅)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၆)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၇)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၈)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၉)
ဧသတာ အခန်းကြီး (၁၀)
ယောဘ အခန်းကြီး (၄၁)
အခန်းကြီး(၁) မှ (၁၀)
အခန်းကြီး(၆၁) မှ (၇၀)
အခန်းကြီး(၇၁) မှ (၈၀)
အခန်းကြီး(၈၁) မှ (၉၀)
အခန်းကြီး(၉၁) မှ (၁၀၀)
အခန်းကြီး (၁၀၁) မှ (၁၁၀)
အခန်းကြီး (၁၁၁) မှ (၁၂၀)
အခန်းကြီး (၁၂၁) မှ (၁၃၀)
အခန်းကြီး (၁၃၁) မှ (၁၄၀)
အခန်းကြီး (၁၄၁) မှ (၁၅၀)
သုတ္တံ အခန်းကြီး (၁၀)
သုတ္တံ အခန်းကြီး (၁၂)
သုတ္တံ အခန်းကြီး (၁၃)
ဒေသနာ အခန်းကြီး (၁၂)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၆)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၇)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၈)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၉)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၀)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၁)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၂)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၃)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၄)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၅)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၆)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၇)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၈)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၉)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၀)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၁)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၂)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၃)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၄)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၅)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၆)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၇)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၈)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၂၉)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၀)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၁)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၂)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၃)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၄)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၅)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၆)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၇)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၈)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၃၉)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၀)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၁)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၂)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၃)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၄)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၅)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၆)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၇)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၈)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၄၉)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၀)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၁)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၂)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၃)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၄)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၅)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၆)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၇)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၈)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၅၉)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၆၀)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၆၁)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၆၂)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၆၃)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၆၄)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၆၅)
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၆၆)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၅)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၆)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၇)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၈)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၉)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၀)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၁)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၂)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၃)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၄)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၅)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၆)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၇)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၈)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၁၉)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၁)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၂)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၃)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၄)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၅)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၆)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၇)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၈)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၂၉)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၀)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၁)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၂)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၃)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၄)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၅)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၆)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၇)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၈)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၃၉)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၀)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၁)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၂)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၃)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၄)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၅)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၆)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၇)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၈)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၄၉)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၅၀)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၅၁)
ယေရမိ အခန်းကြီး (၅၂)
မြည်တမ်း အခန်းကြီး (၁)
မြည်တမ်း အခန်းကြီး (၂)
မြည်တမ်း အခန်းကြီး (၃)
မြည်တမ်း အခန်းကြီး (၄)
မြည်တမ်း အခန်းကြီး (၅)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၅)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၆)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၇)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၈)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၉)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၀)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၁)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၂)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၃)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၄)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၅)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၆)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၇)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၈)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၁၉)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၀)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၁)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၂)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၃)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၄)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၅)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၆)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၇)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၈)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၂၉)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၀)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၁)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၂)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၃)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၄)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၅)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၆)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၇)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၈)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၃၉)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၀)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၁)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၂)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၃)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၄)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၅)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၆)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၇)
ယေဇကျေလ အခန်းကြီး (၄၈)
ဇာခရိ အခန်းကြီး(၁ )
ဇာခရိ အခန်းကြီး(၂ )
ဇာခရိ အခန်းကြီး(၃ )
ဇာခရိ အခန်းကြီး(၄ )
ဇာခရိ အခန်းကြီး(၅ )
ဇာခရိ အခန်းကြီး(၆ )
ဇာခရိ အခန်းကြီး(၇ )
၁ထိုစကားကို ဟေဇကိမင်းသည် ကြားလျှင်၊ မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍ လျော်တေအဝတ်ကို ခြုံလျက် ဗိမာန် တော်သို့ သွားလေ၏။ ၂လျော်တေအဝတ်ကို ဝတ်လျက်ရှိသော နန်းတော်အုပ် ဧလျာကိမ်၊ စာရေးတော်ကြီး ရှေဗန၊ အသက်ကြီးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို အာမုတ်သား ပရောဖက်ဟေရှာယထံသို့ စေလွှတ်လေ၏။ ၃ဟေဇကိ မင်းမှာထားသော စကားဟူမူကား၊ ယနေ့သည် ဒုက္ခနေ့၊ ဆုံးမသောနေ့၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံရသောနေ့ဖြစ်၏။ သားဘွား ချိန်ရောက်၍ သားကိုဘွားနိုင်အောင် ခွန်အားမရှိ။ ၄အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ကဲ့ရဲ့စေခြင်းငှါ၊ အာရှုရိ ရှင်ဘုရင်စေလွှတ်သော မိမိကျွန်ရာဗရှာခစကားကို သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကြားတော်မူပါစေသော။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင်ကြားသော စကားကို ချေတော်မူပါစေသော။ သင်သည်လည်း ကျန်ကြွင်းသောလူတို့အဘို့ ဆုတောင်းပဌနာပြုစေခြင်းငှါ၊ ၅ဟေဇကိမင်း စေလွှတ်သော ကျွန်တို့သည် ဟေရှာယ ထံသို့ ရောက်လာကြ၏။
၆ဟေရှာယကလည်း၊ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ အာရှုရိရှင်ဘုရင်၏ ကျွန်တို့သည်ငါ့ကို ကဲ့ရဲ့၍ သင်သည် ကြားရသောစကားကြောင့် မကြောက်နှင့်။ ၇ထိုမင်း၌ အခြားသောစိတ်သဘောကို ငါသွင်းပေးမည်။ သူသည် သိတင်းကြား၍ မိမိပြည်သို့ ပြန်သွားလိမ့်မည်။ ထိုပြည်၌ ထားဖြင့် ငါဆုံးမစေမည်ဟူသော စကားတော်ကို သင်တို့၏သခင်အား ပြန်ကြားကြလော့ဟု ပြောဆို၏။
၈ထိုအခါ အာရှုရိရှင်ဘုရင်သည် လာခိရှမြို့မှ ထွက်သွားကြောင်းကို ရာဗရှာခကြားလျှင် ပြန်သွား၍ လိဗနမြို့ကို ရှင်ဘုရင်တိုက်နေသည်ကို တွေ့လေ၏။ ၉နောက်တဖန် ကုရှမင်းကြီး တိရက္ကသည် စစ်ချီ၍လာပြီဟု သိတင်းကြား သောအခါ၊ ဟေဇကိမင်းထံသို့ တမန်တော်တို့ကို စေလွှတ်ပြန်၍၊ ၁ဝသင်တို့သည် ယုဒမင်းကြီး ဟေဇကိကိုပြောသော စကားဟူမူကား၊ သင်ကိုးစားသောဘုရားသခင်က၊ ယေရုရှလင်မြို့သည် အာရှုရိရှင်ဘုရင် လက်သို့ မရောက်ရဟူ၍ သင့်ကိုမလှည့်စားစေနှင့်။ ၁၁အာရှုရိရှင်ဘုရင်တို့သည် ခပ်သိမ်းသောပြည်တို့ကို လုပ်ကြံ၍ ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြောင်း ကို သင်သည်ကြားရပြီ။ ကိုယ်တိုင်လွတ်လိမ့်မည်လော။ ၁၂ငါ့ဘိုးဘေးတို့သည် ဖျက်ဆီးသောအမျိုးသား၊ ဂေါဇန် အမျိုးသား၊ ခါရန်အမျိုးသား၊ ရေဇပ်အမျိုးသား၊ တေလသာမြို့၌ရှိသော ဧဒင်အမျိုးသားတို့ကို သူတို့၏ဘုရား များတို့သည် ကယ်ယူကြပြီလော။ ၁၃ဟာမတ်မင်းကြီး၊ အာပဒ်မင်းကြီးနှင့် သေဖရဝိမ်မြို့၊ ဟေနမြို့၊ ဣဝါမြို့ကို စိုးစံ သောမင်းကြီးတို့သည် အဘယ်မှာရှိကြသနည်းဟု မှာလိုက်လေ၏။
၁၄ထိုမှာစာကို ဟေဇကိမင်းသည် သံတမန်လက်မှ ခံယူ၍ ကြည့်ပြီးလျှင် ဗိမာန်တော်သို့သွား၍ ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ ဖြန့်ထားလေ၏။ ၁၅ထိုအခါ ဟေဇိကိမင်းသည် ထာဝရဘုရား ရှေ့တော်၌ လျှောက်ဆိုသည်ကား၊ ခေရုဗိမ်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသော ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်တပါးတည်းသာလျှင် မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၏ ဘုရား သခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ၁၆အိုထာဝရဘုရား၊ နားတော် ကိုလှည့်၍ နားထောင်တော်မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား၊ မျက်စိတော်ကို ဖွင့်၍ ကြည့်ရှုတော်မူပါ။ သနာခရိပ်မင်းသည် အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ကဲ့ရဲ့၍ ပြောစေသောစကား အလုံးစုံတို့ကို မှတ်တော်မူပါ။ ၁၇အိုထာဝရ ဘုရား၊ အကယ်စင်စစ် အာရှုရိရှင်ဘုရင်တို့သည် အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်တို့ကိုဖျက်ဆီး၍၊ ၁၈သူတို့၏ဘုရားများ ကို မီးထဲသို့ ချပစ်ကြပါပြီ။ ထိုဘုရားတို့သည် ဘုရားမဟုတ်၊ လူလက်ဖြင့်လုပ်သော သစ်သားနှင့် ကျောက်ဖြစ်သော ကြောင့် ပျက်ဆီးခြင်းသို့ ရောက်ကြပါပြီ။ ၁၉အို အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ထာဝရဘုရား တပါးတည်းသာ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ကို မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော တိုင်းနိုင်ငံတို့သည် သိမည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ် တို့ကို ထိုမင်းလက်မှ ယခုကယ်ယူတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ် တောင်းပန်ပါသည်ဟု ပဌနာပြုလေ၏။
၂ဝထိုအခါ အာမုတ်သား ဟေရှာယသည် ဟေဇကိမင်းထံသို့ စေလွှတ်၍၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် အာရှုရိရှင်ဘုရင် သနာခရိပ်အကြောင်းကြောင့် ငါ့ရှေ့မှာပြုသော ပဌနာစကားကို ငါကြားရပြီ။ ၂၁ထိုမင်း၏အမှုမှာ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသော စကားဟူမူကား၊ ဇိအုန်သတို့သမီး ကညာသည် သင့်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ ပြက်ယယ်၏။ ယေရုရှလင်သတို့သမီးသည် သင့်နောက်၌ခေါင်းညှိတ်၏။ ၂၂သင်သည် အဘယ်သူကို ကဲ့ရဲ့ဆဲရေးသနည်း။ အဘယ်သူကို အော်ဟစ်၍ မျက်နှာထောင်လွှားသနည်း။ ဣသရေလအမျိုး၏ သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုပင် ပြုပါသည်တကား။ ၂၃သင်သည် တမန်များအားဖြင့် ထာဝရဘုရား ကိုကဲ့ရဲ့၍၊ ငါသည် ရထားများပြသဖြင့် တောင်ထိပ်သို့၎င်း၊ လေဗနုန်တောင်အထွဋ်ိသို့၎င်း တက်လာပြီ။ အရပ်မြင့် သော အာရဇ်ပင်နှင့် အကောင်းဆုံးသော ထင်းရူးပင်တို့ကို ငါခုတ်လှဲပြီ။ အဝေးဆုံးသောခိုလှုံရာ အသီးများသော တောထဲသို့ ငါဝင်ပြီ။ ၂၄ငါသည်တွင်းတူး၍ မမြည်းဘူးသောရေကို သောက်ရပြီ။ ငါ၏ခြေဘဝါးအားဖြင့် အဲဂုတ္တုမြစ် လက်ကြားရေ ရှိသမျှကို ခန်းခြောက်စေပြီဟု သင်ဆိုမိပြီတကား။ ၂၅ငါသည် အထက်ကဤအမှုကို စီရင်ကြောင်းနှင့် ရှေးကာလ၌ ပြုပြင်ကြောင်းကို သင်သည်မကြားသလော။ ယခုမှာလည်း သင်သည်ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကို ဖျက်ဆီး၍၊ ကျောက်ပုံဖြစ်စေသောသူ ဖြစ်မည်အကြောင်း ငါစီရင်ခန့်ထားလေပြီ။ ၂၆ထိုကြောင့် မြို့သားတို့သည် အားနည်းကြ၏။ မှိုင်တွေ၍ စိတ်ပျက်လျက်ရှိကြ၏။ တော်မျက်ပင်တို့သည် စိမ်းသောစပါးပင်ကဲ့သို့၎င်း၊ အိမ်မိုးပေါ်မှာပေါက်သော မျက်ပင် နှင့် မကြီးမှီညှိုးနွမ်းသော စပါးပင်ကဲ့သို့၎င်း ဖြစ်ကြ၏။ ၂၇သင်၏နေထိုင်ခြင်း၊ ထွက်ဝင်ခြင်း၊ ငါ၌အမျက်ဟုန်းခြင်းတို့ကို ငါသိ၏။ ၂၈ငါ၌ သင်၏အမျက်ဟုန်းခြင်း၊ စော်ကားခြင်းကို ငါကြားရသောကြောင့်၊ သင့်ကို နှာရှုတ်တပ်၍ ဇက်ခွံ့ပြီးမှ၊ သင်လာသောလမ်းဖြင့် ပြန်စေမည်။
၂၉သင်မှတ်ရသော နိမိတ်လက္ခဏာဟူမူကား၊ ယခုနှစ်တွင် အလိုလိုကြီးရင့်သော အသီးအနှံကို၎င်း၊ ဒုတိယ နှစ်တွင် ထိုအတူပေါက်သော အရာများကို၎င်း၊ သင်တို့သည် စားရမည်။ တတိယနှစ်တွင် မျိုးစေ့ကိုကြဲ၍ စပါးကို ရိတ်ကြလော့။ စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုလည်းစိုက်၍ အသီးကိုစားကြလော့။ ၃ဝဘေးလွတ်၍ ကျန်ကြွင်းသောယုဒအမျိုးသား တို့သည် တဖန်အောက်မှာ အမြစ်စွဲ၍ အထက်မှာ အသီးသီးကြလိမ့်မည်။ ၃၁ကျန်ကြွင်းသောသူတို့သည် ယေရုရှလင် မြို့ထဲက၄င်း၊ ဘေးလွတ်သောသူတို့သည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်က၄င်း ပေါ်လာကြလိမ့်မည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားသည် အလိုတော်အားကြီး၍ ထိုအမှုကို စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။
၃၂သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သူသည် ဤမြို့သို့ မဝင်ရ။ မြို့ထဲသို့ မြှားကိုမပစ်ရ။ မြို့ရှေ့မှာ ဒိုင်းလွှားကိုမပြရ။ မြို့ပြင်မှာ မြေရိုးကိုမဖို့ရ။ ၃၃လာသောလမ်းဖြင့် ပြန်သွား ရမည်။ ဤမြို့ထဲသို့မဝင်ရ။ ၃၄ငါသည် ကိုယ်မျက်နှာကို၎င်း၊ ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်၏မျက်နှာကို၎င်း ထောက်၍ ဤမြို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ စောင့်မမည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
၃၅ထိုညဉ့်တွင် ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ထွက်၍ အာရှုရိတပ်တွင် လူတသိန်းရှစ်သောင်း ငါးထောင်တို့ကို ဒဏ်ခတ်လေ၏။ နံနက်စောစော ထချိန်ရောက်သောအခါ၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် အသေကောင် ဖြစ်ကြ၏။ ၃၆အာရှုရိရှင်ဘုရင် သနာခရိပ်သည်လည်း ထိုအရပ်မှထွက်၍ ပြန်သွားပြီးလျှင် နိနေဝေမြို့၌ နေလေ၏။ ၃၇နောက်တဖန် သူသည်မိမိဘုရား နိသရုတ်၏ ဗိမာန်၌ကိုးကွယ်စဉ်တွင်၊ သားတော်အာဒြမ္မေလက်နှင့် ရှရေဇာသည် ခမည်းတော်ကို ထားနှင့်သတ်ပြီးလျှင်၊ အာရမနိပြည်သို့ ပြေးကြ၏။ သားတော်ဧသရဟဒ္ဒုန်သည် လည်း ခမည်းတော် အရာ၌ နန်းထိုင်၏။
ဆုတောင်းပြီးမှ ဒီစာမျက်နှာကို ဖတ်ပါ။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အကူအညီ ရယူရန် ဦးစွာ ဆုတောင်းပြီးမှ ဤစာမျက်နှာကို ဖတ်ပါ။
သငျ့ကို ဒုက်ခပေးနတေဲ့ ပွဿနာတှကေို အနိုငျယူဘို့
ယုံကွညျသူမြားကို ကာကှယျမှုပွုနသေော ကောငျးကငျတပျတျောကွီး
မိခငျဟူသညျ . . .
ခရဈဝငျကမျြးမြားတှငျ ဖျောပွသော ခရဈတျောပွုလုပျခဲ့သညျ နိမိတျလက်ခဏာမြား
ဘာကွောငျ့ ဘုရားကြောငျး တတျရတာလဲ။
ဘုရားသခငျနှငျ့အတူ လြှောကျလှမျးသညျဆိုရာဝယျ . . .
ဝိညာဉျရေးရာ ခေါငျးဆောငျကွီး၏ ဂီတာလကျသံ
ရှောလမုနျဘုရငျ၏ အသကျတာကို ဆငျခွငျအောကျမခွေ့ငျး
ဤတရားဟောချက်များကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် သင့်၏ အသက်တာကို ရင့်ကျက်စေပါ။
ယုဒဿန် နှစ်ခြင်းအသင်းတော် (စင်္ကာပူ)
မြန်မာခရစ်ယာန် Ebook များ
MM GOSPEL SONG LYRICS
သင့်အီးမေးလ်ကို ပေးထားရင် ပို့အသစ်တင်တိုင်း သင့်ထံမှာ ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
ဒီဆိုက်ကို ကြိုက်ရင် Like လုပ်ခဲ့ပါ။
Naw glady on ဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျသှယျခွငျး
ဦးမင်းလွင် on ဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျသှယျခွငျး
Kpsteven Hung on ဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျသှယျခွငျး